I-China Dual Biosafety System Icebo labenzi be-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test kunye nabathengisi | Umda weBio
Uvavanyo lweStrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid luvavanyo olukhawulezayo lokuchonga i-COVID-19 antigen ukuya kwintsholongwane ye-SARS-CoV-2 kwi-Swroat / Nasopharyngeal swab yabantu. I-assay isetyenziswa njengoncedo ekuchongeni i-COVID-19.
Ukusetyenziswa kweelebhu zeklinikhi okanye abasebenzi bezempilo kuphela
Ukusetyenziselwa iZonyango kuphela
Yiza nezinto zekiti kubushushu begumbi ngaphambi kovavanyo. Vula isingxobo kwaye ususe isixhobo sovavanyo.
Nje ukuba ivulwe, isixhobo sovavanyo kufuneka sisetyenziswe kwangoko.
Bhala ileta yovavanyo kunye nesazisi sesigulana.
Ukhulule isiciko sefowuni.
1. Beka i-swab kwi-tube, uphule i-swab nge-breakpoint, vumela i-swab yesampuli iwele kwi-tube kwaye ulahle intonga ephezulu.
2. Sikrola isiciko sefowuni.
3. Yaphula intonga eblue.
4. NGOKUSESIKWENI khama ityhubhu eblowu, qiniseka ukuba wonke ulwelo ungena kumbhobho ongezantsi.
5. Vortex isixhobo ngamandla.
6. Guqula isixhobo, vumela isampulu yesampulu ifudukele kumtya wovavanyo.
7. Beka isixhobo kwindawo yokusebenza.
8. Ekupheleni kwemizuzu eli-15 funda iziphumo. Isampulu elungileyo esomeleleyo inokubonisa iziphumo ngaphambili.
Qaphela: Iziphumo ezisemva kwemizuzu eli-15 zisenokungachaneki.
1. Imixholo yale khithi kufuneka isetyenziselwe ukufumanisa ubuchwephesha be-anti-SARS-CoV-2 kwi-swab yomqala kunye ne-nasopharyngeal swab.
2. Olu vavanyo lubhaqa ezisebenzayo (bukhoma) nezingasebenziyo, i-SARS-CoV-2. Ukusebenza kovavanyo kuxhomekeke kubungakanani bentsholongwane (antigen) kwisampulu kwaye inokuthi okanye ingahambelani neziphumo zenkcubeko yentsholongwane eyenziwa kwisampulu efanayo.
3. Iziphumo ezingalunganga zovavanyo zinokwenzeka ukuba inqanaba le-antigen kwisampulu lingaphantsi komda wokufunyanwa kovavanyo okanye ukuba isampulu yaqokelelwa okanye yathuthwa ngokungafanelekanga.
Ukungaphumeleli ukulandela iNkqubo yoVavanyo kunokuchaphazela kakubi ukusebenza kovavanyo kunye / okanye kungasebenzi isiphumo sovavanyo.
5. Iziphumo zovavanyo kufuneka zivavanywe ngokudibeneyo nezinye iinkcukacha zeklinikhi ezifumanekayo kugqirha.
6. Iziphumo zovavanyo ezintle azikuthinteli ukosuleleka kunye nezinye iintsholongwane.
7. Iziphumo zovavanyo ezingalunganga azenzelwanga ukuba zilawule kwezinye izifo ezosulelayo ezingezizo i-SARS okanye iintsholongwane.
8. Iziphumo ezingalunganga kufuneka ziphathwe njengokuzikhukhumeza kwaye ziqinisekiswe ngovavanyo lweemolekyuli ezigunyazisiweyo ze-FDA, ukuba kukho imfuneko, kulawulo lweklinikhi, kubandakanya nolawulo losulelo.
9. Iingcebiso ngozinzo lwesampulu zisekwe kwidatha yozinzo kuvavanyo lomkhuhlane kunye nokusebenza kunokuhluka nge-SARS-CoV-2. Abasebenzisi kufuneka bavavanye iisampulu ngokukhawuleza emva kokuqokelelwa kwemizekelo.
10. Ubuntununtunu besilingo se-RT-PCR kuvavanyo lwe-COVID-19 yi-50% -80% kuphela ngenxa yesampulu esemgangathweni okanye ixesha lesifo kwinqanaba elichaziweyo, njl.njl. asezantsi ngenxa yeNdlela yokuSebenza.
Egqithileyo Uvavanyo lweSARS-CoV-2 lwe-Antigen ekhawulezayo
Okulandelayo: Isixhobo seNkqubo ye-SARS-CoV-2 kunye ne-Influenza A / B Combo Antigen Rapid Test
Inoveli Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-T ...
Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi,